Morocco waxay ka caawisaa beeralayda sharciyeynta xashiishadda caafimaadka • Dawooyinka Inc.eu
Morocco waxay ka caawisaa beeraleyda sharciyeynta xashiishadda caafimaadka
Morocco waxay qorsheyneysaa inay ogolaato beeraha, dhoofinta iyo iibinta gudaha ee xashiishadda si loogu isticmaalo caafimaadka iyo warshadaha, ayay dowladdu sheegtay Khamiistii. Tallaabo ay dowladdu rajeynayso inay ku caawiso beeraleyda saboolka ah ee ku nool buuraha Rif. Gaar ahaan hadda baahida adduunka ee xashiishadda daawo ahaan way sii kordheysaa.
1 Caqliga beeraha: xalaala xashiishadda
2 Ansixinta sharciga xashiishka
Isku day hore oo lagu beeri lahaa xashiishka Marooko sharciyeeyofashilmay. Xisbigii isla xukumayey ee Islaamiga ee PJD ayaa ka tanaasulay mucaaradkiisii ​​kadib markii hay’ada daroogada ee qaramada midoobay ay geedka ka saartay liiska waxyaabaha maanka dooriya ee aadka loo ilaaliyo.
Caqliga beeraha: xalaala xashiishadda
Sharcigan oo la filayo in golaha wasiiradu ay meel mariyaan todobaadka soo socda ayaa looga golleeyahay in lagu hormariyo dakhliga beeraleyda. Intaa waxaa dheer, sharciga cusub wuxuu ka ilaalin doonaa kuwa ka ganacsada daroogada oo hadda xukuma ka ganacsiga xashiishka. Tani waxay fursad u siineysaa beeraleyda suuq sharciyeedka sii kordhaya ee dawada.
Xashiishadda waxaa lagu beeraa inta badan buuraha Waqooyiga Rif, halkaas oo ay ka dhaceen mudaaharaadyo salka ku haya sinnaan la’aan dhaqaale sannadihii la soo dhaafay. Sharciga ayaa siinaya hay'ad qaran oo maamusha wax soo saarka, gaadiidka iyo iibinta. Isticmaalka madadaalada ee xashiishka ee Marooko wali waa la mamnuucayaa.
Ansixinta sharciga xashiishka
Baarlamaanku wali waa inuu ansixiyaa qorshaha. In kasta oo xashiishada sii kordhaysa ay xilligan sharci darro ka tahay dalka Marooko, haddana muddo dheer ayaa loo dulqaatay, boqortooyada woqooyiga Afrika ayaa ka mid ah kuwa ugu soo saarayaasha badan adduunka, sida ay sheegtay hay'adda daroogada u qaabilsan Qaramada Midoobay. Morocco waxay hoos u dhigtay xaddiga dhulka laga beero xashiishadda oo markii hore ahaa 134.000 hektar sanadkii 2003, lix sano ka hor ayaa laga dhigay 47.000 hektar.
Bishii Diseembar, waddamada xubnaha ka ah hay'adda daroogada ee Qaramada Midoobay waxay si dhib yar ugu codeeyeen in xashiishadda laga saaro nooca daroogada ee sida adag loo xakameeyo, ka dib markii ay soo jeedisay Hay'adda Caafimaadka Adduunka (WHO) soo-jeedinta si loo fududeeyo cilmi-baarista ku saabsan adeegsiga caafimaad. Morocco waxay ka mid ahayd waddammada taageeray isbedelka.
Akhri wax dheeraad ah Reuters.com (Source, EN)
cannabisbeerista cannabisdhoofintamarijuanaMoroccodaawo cannabis
Faransiisku wuxuu wadaa tijaabo ah inuu 3000 bukaan ah siiyo xashiish caafimaad oo bilaash ah
Dib udhac yar kadib, Olivier Véran, Wasiirka Isbahaysiga iyo Caafimaadka Faransiiska, ayaa soo saaray wareegto ...
Maxay yihiin xashiishka cannabis, saliidaha iyo dabeecadaha? Qeybta 1
Xashiishadda ayaa isku urursan, saliidaha iyo waxyaalaha laga soosaaray waxay bixiyaan faa iidooyin badan oo gaar ah oo aadan ka heli doonin sigaar cabista ...
Maalinta Hooyada Ha iloobin ubaxa, marijuana mararka qaar waxay noqon kartaa hadiyadda ugu wanaagsan ee 2019.
Cannabis decriminalization, sharciyeynta iyo aqbalaadda bulshada way sii kordheysaa. Kiriimyada CBD iyo waxyaabaha kale ee xashiishka iyo alaabooyinka ku salaysan hemp ...
Sharci-dajinta xashiishku jawaab ma u tahay dhibaatada corona?
Siyaasadda daroogada 2.0
Taageerayaasha Crypto Waxay Hadda Iskudayaan Inay Sameeyaan 4/20 "Maalinta Doge" Adoo Kordhinaya Qiimaha Lacagta Dogecoin
Iswiiska wuxuu ka bilaabey tijaabo suuqa isticmaalka xashiishka sharciga ah si loo barto xeerarka mustaqbalka
Cilmi-baarista Harvard waxay xustay xashiishadda inay tahay ikhtiyaar daaweyn wax ku ool ah oo loogu talagalay xanuunka daba dheeraada
4 faa'iidooyinka xiisaha leh ee saliida CBD ee caafimaadka maskaxda
saamiyada America maalgelinta Canada Canna-Tech cannabis beerista cannabis CBD saliid cbd cocaine Fayras Corona dembi go'aan qaadasho daroogada waxbarashada Europa maaliyad ahaan caafimaad leh caafimaadka xagasha sharci ahaan sharciyeynta sharci-dejinta lsd mdma daawo cannabis daawada cawska microdosing Nederland netflix cilmi baaris boqoshaada maskaxiyan mukhaadaraadka synthetic THC Maraykanka Boqortooyada Ingiriiska qabatinka cunto Adduunka oo dhan sharciga saliida cannabis baaritaanka weed beerista cannabis xtc